ကောင်းမွန်တဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကို ဘယ်လိုပေးကြမလဲ? -
Posted on October 30, 2018 January 9, 2019 Author Wynee Myanmar	Comment(0)
အကြံပေးချင်ပေမဲ့ ဘယ်လို အကြံပေးရမလဲ မသိဖြစ်နေခဲ့ရင်…
တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ်က ဝေဖန်အကြံပြုတာမျိုး လုပ်ပေးချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြောရခက်နေတာမျိုး၊ ကိုယ်ပြောလိုက်လို့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေက ကိုယ့်ကို အမြင်မကြည်တော့မှာကို စိုးရိမ်နေတာမျိုး၊ သူတို့နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့မှာ စိုးတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြလား ယောင်းတို့? ဒီလိုဆိုရင်တော့ Wynee က အက်ဒ်မင်တို့က တစ်ဆင့် ယောင်းယောင်းတို့ရဲ့ အခက်အခဲအတွက် ကူညီပေးလိုက်ပါပြီနော်…
သင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ အကြံပြုဝေဖန်ချက်မှာ အခြေအနေ-အပြုအမူ-အကျိုးဆက် ဆိုတဲ့ အချက်အလက် (၃)ခု ပါပါတယ်။
အခြေအနေကို ဖော်ပြတဲ့အခါ နေရာနဲ့အချိန်ကို ဖော်ပြပေးပါ။ ဥပမာ “ယောင်းရေ… မနေ့ကအစည်းအဝေးမှာ presentation လုပ်တုန်းက….” စသဖြင့်နဲ့ အစချီပါ။
ယောင်းအဓိကထားပြီး ပြောချင်တဲ့ အပြုအမူတွေကို အချက်အလက်နဲ့တကွ တိတိကျကျပြောပါ။ ဥပမာ “မနေ့ကအစည်းအဝေးမှာ ယောင်း presentation လုပ်တုန်းက slide ၂ ချက်က မရေမရာဖြစ်နေတာနဲ့ ရောင်းအားပြဇယားမှာ အမှားတွေကိုတွ့ခဲ့ရတယ်” ဆိုတာမျိုးပေါ့..
ဒီလို အမှားတစ်စုံတစ်ရာ ရှိခဲ့လို့ ဘယ်လို အကျိုးဆက်မျိုး ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ ထည့်ပြောသင့်ပါတယ်။ ယောင်းနဲ့ တခြားသူတွေ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ခံစားရတဲ့ အကြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါ ကျွန်တော်/ကျွန်မ နာမ်စားကိုသုံးပါ။ ဥပမာ “မနေ့ကအစည်းအဝေးမှာ ယောင်း presentation လုပ်တုန်းက slide ၂ ချက်က မရေမရာဖြစ်နေတာနဲ့ ရောင်းအားပြဇယားမှာ အမှားတွေကိုတွ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီမှာ ဒါရိုက်တာတွေလည်း ရှိနေတာမို့ ဒီလိုအမှားဟာ ကိုယ့်အဖွဲ့အတွက် မကောင်းဘူးလို့ ကျွန်မတော့ ထင်မိတယ်” လို့ပြောမယ်ဆိုရင် ဒါဟာ သင့်လျော်တဲ့ အကြံပြုချက်တစ်ခုပါပဲ။
၁။ တခြားသူတွေ အခြေအနေတစ်ခုကို သုံးသပ်ဖို့ အကြံပြုချက်တွေ ပေးဖို့ အားပေးပါ။
၂။ သူပေးတဲ့အကြံပေးချက်ကို နားလည်ဖို့ အချိန်ပေးစဉ်းစားပီး အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ချမှတ်ပါ။
၃။ တခြားသူတွေ ကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အခါတိုင်းမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အကြုံပြုချက်တွေပေးပြီး ပိုမိုတိုးတက်အောင် ကူညီပေးပါ။
HOW TO PROVIDE GOOD FEEDBACK? THE SITUATION – BEHAVIOUR – IMPACT (SBI) TOOL
Have you ever faced difficulties giving feedback? Do you find it difficult handling confrontation with colleagues? If you are one of them, #Wynee wants to help you deliver more effective feedback.
The Situation – Behavior – Impact (SBI) Feedback Tool will help you focus on delivering appropriate comments to specific situations and behaviors.
SITUATION: Define where and when; in other words, put your feedback into context (e.g. “During the meeting yesterday, when you gave the presentation..”)
BEHAVIOUR: Describe specific behaviors you want to address. It’s important for you to focus on the mistake (factual information), do not make assumptions (e.g. “During the meeting yesterday, when you gave the presentation, you were uncertain about two slides and your sales projections were incorrect.”)
IMPACT: Use “I” statements to describe how you and others felt asaconsequence (“During the meeting yesterday, when you gave the presentation, you were uncertain about two slides and your sales projections were incorrect. I felt embarrassed because the directors were there. I’m worried this has affected our team’s reputation.”)
a) Encourage the other person to think about the situation and provide feedback.
b) Give time to digest the feedback, develop specific actions together to improve the situation.
c) Provide positive feedback on what the other person has done well, and help him/her build on it.
Tagged behaviour, Career, environment, Feed back, IMPACT, Job, SITUATION, work
Posted on November 1, 2017 Author Miko
နိုင်ငံခြားကလာတာဆိုပြီး ပစ်အထင်ကြီးလေးစားပစ်လိုက်တာပဲလား.. မလိုပါဘူးနော်.. ဘာတွေကလိုတာလဲဆိုတော့
Posted on August 5, 2018 Author Ei Mon
အချစ်ဦး Vs အချစ်ဆုံး